Fotoana famakiana: 3 minitra Androany maraina aho dia nihaona tamin'ny mpanjifa iray izay misy toerana marobe amin'ny orinasany. Raha nahatsiravina ny fahitana ara-organika azy ireo ho an'ny tranonkalany, nahafinaritra ny fametrahana azy ireo ao amin'ny faritra Google Map pack. Nuansa tsy azon'ny orinasa maro io. Ny pejin'ny valin'ny motera isam-paritra dia misy fizarana telo lehibe: Fikarohana karama - enti-milaza soratra kely milaza hoe Ad, ny doka dia mazàna no misongadina eo an-tampon'ny pejy. Ireo teboka ireo
Fotoana famakiana: 3 minitra Lafiny iray mahaliana amin'ny indostria misy ahy ny fanavaozana mitohy sy ny fidinan'ny vidin'ny fidiram-bola ho an'ireo sehatra fanaovana automatisation tena be pitsiny. Ny toerana nandanian'ireo orinasa an'arivony dolara (ary mbola anaovany) ho an'ny sehatra lehibe… ankehitriny dia nidina be ny vidiny raha toa ka mihatsara hatrany ireo sanganasa. Vao haingana izahay no niara-niasa tamin'ny orinasa mpanatontosa lamaody orinasa izay vonona hanao sonia fifanarahana ho an'ny sehatra iray izay handoa azy ireo mihoatra ny antsasaky ny iray tapitrisa dolara
Fotoana famakiana: 3 minitra Na dia efa an-taonany maro aza ny lalàna mifehy ny fahazoana miditra amin'ny tranokala, tsy nihetsika ny orinasa. Tsy mino aho fa resaka fiaraha-miory na fangoraham-po amin'ny lafiny orinasa… Tena mino aho fa miady mafy ny hitazona ireo orinasa. Ohatra, Martech Zone ambany toerana noho ny fahazoana miditra. Rehefa nandeha ny fotoana dia niasa nanatsara ny fikajiana sy ny famolavolana ary ny metadata ilaina… aho saingy sarotra ny manaraka ny fitazonana fotsiny
Fotoana famakiana: 4 minitra Froala WYSIWYG Rich Text Editor
Fotoana famakiana: 7 minitra Nandritra ny taona maro dia nanampy fikambanana maro aman-jatony aho tamin'ny fananganana paikadin'ny votoatiny sy ny fanatsarana ny fahitana ny motera fikarohana rehetra. Ny dingana dia somary mahitsy: Performance - Hamarino tsara fa mahomby ny tranokalan'izy ireo raha ny amin'ny hafainganam-pandeha. Fitaovana - Hamarino fa ambony noho ny birao ary indrindra amin'ny finday ny traikefan'izy ireo. Famantarana - Ataovy azo antoka fa manintona, mora ampiasaina, ary marika tsy tapaka miaraka amin'ny tombony sy ny fanavahana azy ireo ny tranonkalany. Votoatiny - Alao antoka fa manana atiny izy ireo
Page 1 ny 45